कस्तो अचम्म ! आमालाई मार्न प्रेमीलाई १२ लाखको सुपारी : समातिए हत्यारा (भिडियो सहित ) «
कस्तो अचम्म ! आमालाई मार्न प्रेमीलाई १२ लाखको सुपारी : समातिए हत्यारा (भिडियो सहित )
प्रकाशित मिति : 1 July, 2019 7:51 pm
काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटीमा सावित्री भट्टराईको हत्या आफ्नै छोरीले प्रेमीसँग मिलेर गराएको खुलासा भएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा छोरीसहित चारजनालाई सार्वजनिक गरेको छ ।
हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा सिरहा विष्णुपुर घर भई हाल भक्तपुर पुरानो ठिमी बस्दै आएका २३ वर्षीय मोहम्मद नैसाद, भारत जनक भगत ईडीका २४ वर्षीय अर्जुन कुमार भनिने भोला कुमार, भारत मधुमनी रजौरी थानाका २४ वर्षीय मोहम्मद रहिश र मृतककी कान्छी छोरी २७ वर्षीय ईश्वरी भट्टराईलाई सार्वजनिक गरेको हो । आमाको हत्या योजना छोरी ईश्वरीले नै बनाएकी थिइन् ।
महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सहकुल थापाका अनुसार मोहम्मद नैसाद ईश्वरी भट्टराईको प्रेमी भएको खुलेको छ । ईश्वरी विवाहित हुन् । उनका श्रीमान् विमानस्थल क्षेत्रमा होटलमा काम गर्दै आएका थिए । प्रहरीका अनुसार ईश्वरी र मोहम्मद नैसादबीच तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध चल्दै आएको थियो । थापाले भने, ‘‘ईश्वरीले बीचमा मोहम्मदलाई विदेश पठाउन एक लाख सहयोग गरेको पनि देखियो ।”
तर, मोहम्मद एक–डेढ महिनामै नेपाल फर्किए । उनी नेपाल फर्किएपछि ईश्वरीसँग फोन सम्पर्कमा रहेनन् । आफूहरुको सम्बन्ध आमालाई थाहा भएपछि छोरीले आफूहरुको बीचबाट आमालाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव मोहम्मदसँग गरिन् । थापाले भने, ‘‘मोहम्मदले आफू एक्लैले आमालाई मार्न नसक्ने, भारतबाट केही व्यक्तिलाई बोलाउने र त्यसका लागि पैसा लाग्ने बताए । उनीहरुबीच सहमति भएपछि ईश्वरीले आमालाई मार्नका लागि १२ लाखको सुपारी दिने सहमति भयो ।’’ १२ लाखमा कुरा मिलेपछि मोहम्मदले भारतबाट दुईजनालाई नेपाल बोलाएका थिए ।
आइतबार सावित्री कान्छी छोरी ईश्वरीकै डेरामा थिइन् । ईश्वरी भने डेरामा थिइनन् । एसएसपी सुवेदीले भने, ‘‘हिजो (आइतबार) बिहान मोहम्मद लगायतको टोली कोठामा गएपछि दुई–तीन मिनेट उनीहरुका बीचमा विवाद पनि भएको देखिन्छ । त्यसपछि उनीहरुले मिलेर चक्कुले घाँटी रेटेर हत्या गरे ।’’